नेपालमा खेलकुदको अवस्था – Khel Dainik
नेपालमा खेलकुदको अवस्था
असार २२, २०७४ | (PostaComment)
सन्तोष आचार्य (कराते खेलाडी)
खेलकुदको जन्म कहिले र कहाँ भएको हो भन्ने अाज सम्म यकिनका साथ भन्न सकिएको छैन । साधरणतया, उफ्रिनु, कुद्नु वा शारीरिक अभ्यासलाई खेलकुदको रुपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ । संसारमा खेलकुदको अबस्था फट्को मारे पनि हाम्रो अबश्था अझै केही खेल बाहेक सबै बामे अबश्थामा नै छन ।
यसको कारण के होला, देशले खेलकुदमा प्रत्येक वर्ष बजेट छुट्याउने र खेल कार्यक्रममा अरौबौ खर्च गरे पनि किन सोचे जति नतिजा अाउन सकेको छैन । जुनकुरा केही समय अघि भएको रास्ट्य खेलकुदमा विभागिय टिम बाहेक अरुले नतिजा हासिल गरेनन् ।
म पनि एक खेलाडी भएको हैसियतले अाफ्ना विचार राख्दछु । खेलको विकास हुन नसक्नुको कारण:-
१. उदेश्य तथा कार्य योजनाको अभाव (Lack of objectives and Planning)
योजनाले भविष्यमा के गर्ने , कहाँ सम्म पुग्ने र कसरी गर्ने तथा श्रोत र साधनको परिचालन कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई मार्गदर्शन गर्दछ । हाम्रो खेल जगतमा व्यक्तिको ब्यक्तिगत योजना र संस्थागत योजनाको पुर्वानुमान गर्ने कार्य शुन्य छ । त्यसैगरी, यहाँ उदेश्यको जन्म खेलको कार्यक्रम घोषणा भएपछि हुन्छ । यहाँ खेल खेलमा सहभागी हुनको लागि खेलिन्छ, जित्ने अभिप्रायले होइन । त्यसैगरी,
खेलकुद कार्यक्रम खेलाडी जन्माउन होइनन् कार्यक्रमको लागि कार्यक्रम गर्ने अभिप्रायले गरिन्छ ।
२. खेललाई कर्म क्षेत्र बनाउन नसक्नु (Difficulties to beaProfessional)
छिमेकी मुलुकबाट हेरौ, प्रत्येक घरमा पहिलो छोराछोरीको जन्म हुनासाथ ,पहिलो सपनाको जन्म किर्केट खेलाडी बनाउने हुन्छ । तर, हाम्रो देशमा खेल खेलेर व्यक्तिको पेट पाल्न गार्‍हो छ, परिवारको कुरा नगरुम । अनि, खेलकुद मै लागेर , मेरो जीवन यापन गर्न सक्छु भन्ने उपयुुक्त वातावरणको श्रृजना हुन नसक्नु ।
३. राजनीतिको हाबि (Polluted by Politics )
भनिन्छ, राजनीति गर्ने एउटा थलो खेलकुद पनि हो । पाटिगत र गुर्पिजमले संस्था धमलिएको छ । यहाँ,प्रशिक्षकहरु प्रशिक्षण भन्दा राजनीति गर्न पोक्त मानिन्छन । अनि, चाप्लुसि, नातावात, कृपावातले योग्य र दक्ष शक्तिलाई अोझेलमा पारेको छ । राजनीति अावरणमा,खेल प्रशिक्षक खेल शिकाउने र खेलाडी उत्पादन गर्ने शिर्षकमा राज्यवाट तलब लिए पनि यहा हाजिरी गर्न देखि बाहेक अन्य बेला देखिदैनन ।
४. प्रयाप्त पुर्वाधारको अभाव (Lack of resources )
भनिन्छ, नेपाल भनेको काठमाडौ मात्र हो । किनभने, हरेक कार्य गर्ने अन्तिम विन्दु अनि सेवा र बिकास भएको ठाउँ त्यहीँ मात्र हो । देशमा, सबै ठाउँमा उपयुक्त खेलकुद पुर्वाधार पुग्न नसक्नु र पुगे पनि केन्द्रीकृत रहनु ।
५. प्रशिक्षकको लापरबाही (Careless Coaching )
दक्ष खेलाडी खेलाउने प्रशिक्षक नेपालमा म कमि देख्छु । प्रशिक्षक एक गुरु, उत्प्रेरकर्ता, साथीभाइ तथा दक्ष ब्यक्ति हुनु पर्दछ । साथै, समय सापेक्ष प्रशिक्षकको वृद्धि विकासका साथै उनिहरुलाई तालिमको माध्यमबाट कार्य कुशलतामा अभिवृद्धि गर्नु पर्दछ, त्यसको अभाव छ । साथै , अाधारभुत प्रशिक्षण गराउने प्रशिक्षक र विशिष्ट प्रशिक्षण दिने फरक हुनु पर्दछ, त्यो छैन । त्यसैगरी, वर्तमानमा अाएर, खेलाडीलाई नै प्रशिक्षण गराउन लगाएर अाफु अन्य कार्यमा लागेको पनि पाईन्छ ।
६. कमजोर प्रणाली (Weak System )
प्रत्येक जिल्ला , क्षेत्र र केन्द्रमा खेलकुदका विभागहरु छन । तिनिहरुको अधिनमा खेल प्रशिक्षक र खेलाडी छन । अाज सम्म, कति वडा खेलको अभ्यास दैनिक रुपमा भएका छन्, कति प्रशिक्षक छन अनि कति खेलाडी छन त्यस्को हेक्का सम्बन्धित निकाय सग छैन । कति घण्टा प्रशिक्षकले Basic Training अनि कति घण्टा Special Training प्रशिक्षकले हप्ता वा महिनामा अायोजना गर्यो, त्यस्को लेखा जोखा गर्ने हिम्मत अाज सम्म सम्बन्धित निकायले गर्न सकेको छैन । त्यसैगरी, राम्रो प्रशिक्षकको मनोवल वृदिको लागि बढुवा गर्ने प्रणालीको विकास गर्न सकेको छैन । किनकि प्रणालिले, राम्रो होइन हाम्रो मान्छे खोज्छ ।
← नेपालले एएफसी फुटसल च्याम्पियनसिप छनौट खेल्ने मध्यमाञ्चलका अजितको राष्ट्रिय किर्तिमान →
रुपन्देहीको फुटबलले सम्झियो ‘लव खत्री’ असार २२, २०७४
अब दक्षिण एसिया मै साफ क्लब च्याम्पियनसिप हुने असार २२, २०७४
नेपाल यु–२३ फुटबल टोलीले इण्डोनेसियासँग खेल्ने सम्भावना असार २२, २०७४
नेपाली फुटबल टोलीलाई नगद पुरस्कारको घोषणा असार २२, २०७४
उपविजेता नेपाललाई २५ हजार अमेरिकी डलर असार २२, २०७४
ऐतिहासिक उपाधि जित्नबाट चुक्यो नेपाल असार २२, २०७४